Daawo Sawirrada Weerarkii Alshabaab ay Xalay ku qaadeen Mandheera iyo Qasaaraha ka dhashay oo la soo Bandhigay | Kismaayo24 News Agency
Daawo Sawirrada Weerarkii Alshabaab ay Xalay ku qaadeen Mandheera iyo Qasaaraha ka dhashay oo la soo Bandhigay
Tuesday October 25, 2016 - 11:06 under Somali News by Tifaftiraha K24
Inta la xaqiijiyay 12 Qof ayaa ku dhimatay halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 25 qof kadib markii Dagaalyahano ka tirsan Alshabaab ay weerar qorsheysan ku qaadeen Magaalada Mandheera ee Gobolka Wuqooi bari Kenya.
Sida laga soo xigtay Wargeyska Maalinlaha ah ee Daily Nation ee ka soo baxa Magaalada Nairobe ayaa sheegaya in Ciidamada Booliska Dalka Kenya ay subaxnimadii hore ee maanta baaritaano Xooggan ku qaadeen qeybaha kala duwan ee Magaalada Mandheera,waxaana la xiran isu socodka dadka Gaadiidka iyo waliba ganacsiga Magaalada.
Taliyaha Ciidanka Booliska Mandera ayaa warbaahinta u sheegay in weerarka uu ka dhacay Hotel lagu magacaabo Bishaaro oo ku yaalla degmada Mandera.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in dadka ku dhintay weerarka ay u badan yihiin dad booqasho ku yimid degmada Mandera , islamarkaana u jeedadoodo ay aheyd in ay ka qeyb galaan imtixaanka shihaadada dugsiga sare.
Alshabaab ayaa sheegtay Weerarka Mandheera iyagoona sheegay in ay ku dileen Askar kenyaan ah.